ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခများအား ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံမှ သုံးသပ်ခြင်း - အပိုင်း (၁)
အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခများအား ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံမှ သုံးသပ်ခြင်း - အပိုင်း (၁)
ဒီမိုကရေစီကို အသွင်ကူးပြောင်းနေသည်ဟု ကြွေးကြော်ဖေါ်ဆောင်နေသော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များ၌ စစ်မှန်သည့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရန် အလားအလာ မတွေ့ရသေး။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ မဖြစ်ပွားသည့် မြေပြန့်ဒေသများမှာပင် အကြမ်းဘက်ပဋိပက္ခများ တိုးများလာ၊ နိုင်ငံပြင်ပမှလည်း ဟိုကသည်က ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပေါ်လာလျှက်ရှိနေကြောင်း တွေ့ရသည်။ တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကို ထိတ်လန့်ရ၊ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်များကို ကြောက်ရ၊ အကြမ်းဘက်သမားများ၏ အန္တရာယ်ကို သတိထားနေရနှင့် တိုင်းပြည်၏ ဒေသအမြောက်အများ၌ သာမန် လူထုပေါင်းမြောက်များစွာမှာ ယုန်သူငယ်များဘ၀သို့ ကျဆင်းနေရသည်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် ပြိုကျတော့မည်လားဟု စိုးရိမ်ရသည်အထိပင် ယိုင်လဲ ချိနဲ့လာခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်း၊ တည်ငြိမ်ကာ အခြေခံလူထု စီးပွားရေး တိုးတက်မှုရနိုင်ရေးအတွက် “စစ်မှန်သည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံများ” ကို တည်ဆောက်ရန်မှာ အရေးတကြီး လိုအပ်ချက် ဖြစ်လာသည်။
“စစ်မှန်သည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံများ” ဟူသော စကားလုံးကို သုံးစွဲရခြင်းမှာ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတု လွှမ်းမိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်သည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို စကားလုံးအရ သုံးစွဲခဲ့သော်လည်း ယင်းမှာ မည်သို့အဓိပ္ပါယ်ရှိကြောင်းကို မည်သည့်အခါကမျှ လူထုကို ရှင်းပြခဲ့ခြင်းမရှိ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ နိုင်ငံတော်အခြေခံမူများ ဟူသော ကဏ္ဍတွင်မူ ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို စကားလုံးအရပင် ထည့်သွင်းမထားတော့။ အကြောင်းမှာ ယင်း၏ အနှစ်သာရများကို တိုင်းပြည်၏ အချုပ်အခြာဖြစ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ကျင့်သုံးလိုခြင်း မရှိသောကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်း မှတ်ယူရပါတော့မည်။
ချုပ်ပြောရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ “စစ်မှန်သည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံများ” အား လူထုတရပ်လုံး စနစ်တကျ လေ့လာခွင့် မရသေးပါ။ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်က ယနေ့အချိန်အထိ ကျင့်သုံးနေသော ဥပဒေစိုးမိုးရေးဟူသည်မှာ နိုင်ငံတကာ စံထားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး Rule of Law မဟုတ်။ အာဏာပိုင်များက ပြဌာန်းထားသည့် ပြည်တွင်းဥပဒေများအတိုင်း စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခြင်း Rule by Law အဆင့်တွင်သာ ရှိနေသေးကြောင်း တွေ့ရသည်။
“ရခိုင်ပဋိပက္ခတွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအား (ကက/ကြည်း) က တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်း ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာအရ ပေါ်လွင်သဖြင့် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တွင် တာဝန်ရှိသည်။ (ကာ/လုံ) အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကို တာဝန်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါက (ကာ/လုံ) အဖွဲ့ဝင်အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိသည်။ သို့မဟုတ်ဘဲ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်အား ရခိုင်ပဋိပက္ခများကိစ္စ ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ပေးခဲ့ပါက ဦးသိန်းစိန်သည် အကြီးအကဲ (၁) အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်သည် လက်အောက်ငယ်သား (၂) အနေဖြင့်လည်းကောင်း တာဝန်ရှိသည်။”
၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်း၍ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ကာ ယနေ့တိုင် အတည်ပြု ကျင့်သုံးလျှက်ရှိသော တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၅) တွင် အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရသည်။
“တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည် အခွင့်အာဏာများအား ဥပဒေနှင့်အညီ ကျင့်သုံးသည်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအောက်တွင် ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံကို တည်ဆောက်သည်။” ယင်းပြဌာန်းချက်ကို လေ့လာလျှင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းမှာ မည်ကဲ့သို့သော ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဖြစ်ပါသနည်း။
“တရုတ်နိုင်ငံသည် Rule by Law နှင့် Rule of Law ကို ပေါင်းစပ်ကျင့်သုံးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊” ဆွီဒင်နိုင်ငံ စတော့ဟုမ်းမြို့၊ စတော့ဟုမ်းတက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မေလ (၈) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့် နီးနှောဖလှယ်ပွဲ၌ တရုတ်နိုင်ငံ ပီကင်းတက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနမှ ပါမောက္ခ Dr. Gong Renren က ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ၄င်း၏ အဆိုအရ တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာ စံထားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအဆင့်ကို မသွားနိုင်သေးကြောင်း သုံးသပ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ဤမျှပေါင်းစပ်ကျင့်သုံးခြင်းသည်ပင် တရုတ်နိုင်ငံအတွက် များစွာအကျိုးရှိကြောင်း ထင်ရှားသည်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံတွင် ယနေ့ တရုတ်နိုင်ငံသည် စည်းလုံးညီညွတ်မှု တည်ဆောက်နိုင်ရုံသာမက နိုးနေသော နဂါးကြီးအဖြစ် စီးပွားရေးအရ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာလျှက်ရှိသည်။
Rule of Law နှင့် Rule by Law စကားလုံးနှစ်လုံး၏ ဆက်စပ်မှုနှင့် ကွာခြားမှုကို လေ့လာမိပါက “ဥပဒေစိုးမိုးရေး” ဟူသောစကားလုံးကို လွယ်လင့်တကူ သုံးစွဲ၍ မရနိုင်ကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် နိုင်ငံတကာ စံထားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဟူသည်ကို လူထုကြီးတရပ်လုံး လေ့လာကာ တတ်နိုင်သမျှ လက်တွေ့ဖေါ်ဆောင်သင့်သော အချိန်ရောက်ပါပြီ။ စစ်အာဏာရှင်များ တည်ဆောက်ထားသည့် ဥပဒေဘောင်နှင့် ၄င်းတို့ စိတ်ကြိုက်ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများအတိုင်း စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခြင်း Rule by Law တို့အား တိုက်ဖျက်သင့်သော အချိန်သို့ ရောက်ပါပြီ။
ဤစာတမ်းငယ်တွင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အကျယ်တ၀င့်ရှင်းလင်းပြမည်တော့ မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် မျက်မှောက်ဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခများအား ဥပဒေစိုးမိုးရေး ရှုဒေါင့်မှ ထောက်ပြသုံးသပ်ပါမည်။ ထို့နောက် ယင်းတို့အား စနစ်တကျဖြေရှင်းကာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံလူထုကြီးတရပ်လုံး ငြိမ်းချမ်းမှု၊ တရားမျှတမှုနှင့် တိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးမှုတို့ ရနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ စံထားချက် လမ်းကြောင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကျင့်သုံးနိုင်ရေးအတွက် ဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအကျဆုံး အဆိုပြုချက် အချို့ကို တင်သွင်းဆွေးနွေးသွားပါမည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံကို မတည်ဆောက်နိုင်ခြင်း။
မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ဥပဒေအားလုံး၏ အချုပ်အခြာဖြစ်သည်။ ယင်း၏သဘောမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် မညီသော တည်ဆဲဥပဒေမှန်သမျှကို ဖျက်သိမ်းပစ်ရသည်။ နောင်ပြဌာန်းမည့် ဥပဒေများသည်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံကို တည်ဆောက်လိုပါက ဥပဒေအားလုံး၏ အချုပ်အခြာဖြစ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ယင်း၏ အုတ်မြစ်ကို ချမှတ်ရပါမည်။
ဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ အခြေခံအကျဆုံးမူမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အပြစ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး လူတိုင်းဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် တန်းတူခံစားခွင့်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ဤမူကို အခြေခံအားဖြင့် ဥပဒေနှင့် နီးစပ်သူတိုင်း သိကြပါသည်။ အသစ်အဆန်း မဟုတ်ပါ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့စဉ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်း (ယခုဦးရွှေမန်း) ကိုယ်တိုင်ပင် တိုင်းသိပြည်သိ ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ဥပဒေစိုးမိုးရေး၏ အသစ်အဆန်း မဟုတ်သည့် ဤမူနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ မည်သို့ လက်တွေ့ကျင့်သုံး အကောင်အထည်ဖေါ်သင့်သည်၊ မည်သည်တို့မှာ အဟန့်အတားဖြစ်နေသည်၊ ဤမူကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် မည်သည့်ဥပဒေများကို ဖျက်သိမ်း၊ ပြင်ဆင်၊ အသစ်ပြဌာန်းသင့်သည်၊ ဟူသည်တို့နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ အလေးထားကာ ယခု လွှတ်တော်ဥက္ကဌနေရာတွင် ယူထားသော ဦးရွှေမန်းသည် လွှတ်တော်အတွင်း၌ မည်သည့်အခါကမျှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်ကို မကြားသိရပါ။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဦးဆောင်ရန် ဆိုသည်မှာ ဝေလာဝေးပင်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပုဒ်မ ၄၄၅ အပေါ် သုံးသပ်ချက်
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အပြစ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး လူတိုင်း ဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် တန်းတူခံစားခွင့်ရှိရမည် ဟူသည့် မူကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက အာမခံရပါမည်။ မဆန့်ကျင်စေရပါ။ သို့ရာတွင် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှစ၍ အာဏာသိမ်း အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် သက်တမ်းကာလအတွင်း ဖြစ်ပွားကျူးလွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ တာဝန်ရှိမှုကို ဖုံးကွယ်ကာ “မည်သည့် တရားရုံးတွင်မျှ တရားစွဲဆိုခွင့် မရှိစေရ” ဟူသည်ကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၄၅ တွင် ပြဌာန်းထားသည်။ ယင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြွင်းမဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါပြဌာန်းချက်မျိုးကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် တည်ဆဲ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ၌ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မျှ မတွေ့ရပါ။ ယင်းအပေါ် ဥပဒေအထောက်အကူပြု ကွန်ယက်မှ ဆွေးနွေးမှုအား ၂၀၁၃ မေလ (၇) ရက်နေ့တွင် ဘီဘီစီမှအသံ လွှင့်သွားသည်ကို ဤလင့်ခ်တွင် နားဆင်ပါ။ https://docs.google.com/file/d/0BzC8VZhwp11AbTdrNlVyQ1FUb0k/edit?usp=sharing
ပုဒ်မ ၄၄၅ ပြဌာန်းချက်သည် လူတိုင်း ဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် တန်းတူရေး ဟူသည့် အခြေခံမူကို အဆင့်နှစ်ဆင့်အရ ဆန့်ကျင်လျှက်ရှိသည်။ ပထမအဆင့်မှာ စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်ဟောင်းများသည်သာ အကြွင်းမဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရနေကြသည်။ အခြားသာမန်ပြည်သူများ မခံစားရပါ။ ဒုတိယအဆင့်မှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူခြင်းတူပါက န၀တ၊ နအဖ စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များသာ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ကို ခံစားကြရသည်။ ၄င်းတို့၏ အမိန့်ပေးမှုအရ သက်ဆိုင်ရာမှုခင်းများ၌ မြေပြင်တွင် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ဖေါ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့် အခြားစစ်ခေါင်းဆောင်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်များမှာ အဆိုပါ အခွင့်အရေးကို ခံစားခွင့် မရကြပါ။ အချိန်မရွေး တရားစွဲခံရနိုင်သည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံသည် ခွဲခြားမှုကို အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ကျင့်သုံးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးခြင်းမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အုတ်မြစ်တချပ် ဖြစ်နေသည်။ သို့ဖြစ်၍ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ မည်သူ့ကိုမဆို တိတိကျကျ စုံစမ်းရှာဖွေ ဖေါ်ထုတ်ကာ အရေးယူ အပြစ်ပေးခြင်းဖြင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးတည် ဆောက်ရမည်ဟူသော အသံကို လူ့အဖွဲ့အစည်း၌ ကျယ်လောင်စွာ မကြားရတော့ပါ။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ပျက်သည့် အခြေအနေကို တပြည်လုံး၌ ကြုံတွေ့နေကြရသည်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံသည် တိုင်းပြည်တွင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ပန်းခင်းသောလမ်းကို မတည်ဆောက်နိုင်ပါ။ ပြောင်းပြန်ပင် ၄င်းသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆက်လက်ပျက်သုဉ်းစေ၇န် ငရဲမီးခင်းသောလမ်းကို ဖေါက်ပေးထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ပျက်စီးစေခဲ့ရာ၌ မည်သူ့တွင် အမြင့်ဆုံး တာဝန်ရှိသလဲ။
ရခိုင်ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ စာမျက်နှာ ၈၇ တွင် “နစက သည် ကက (ကြည်း) ၏ တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ရှိနေကြောင်းနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများ၏ အမိန့်ကိုသာ နာခံရပြီး ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်သူများ၏ အမိန့်ကို နာခံနိုင်ခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း” အတိအလင်း ဖေါ်ပြထားသည်။ ကက (ကြည်း) သည် (ကာ/လုံ) ၏ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့၏ တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေး ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင် ရှိသည်။
ရခိုင်ပဋိပက္ခများအတွင်း (ကာ/လုံ) က ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံကို ရိုက်ချိုးခဲ့သည့် အဓိက ဖြစ်ရပ်ကြီးနှစ်ခုရှိခဲ့ကြောင်း ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာအရ ပေါ်လွင်သည်။ ၄င်းတို့မှာ ၂၀၁၂ ဇွန်လ (၃) ရက်နေ့တွင် တောင်ကုတ်၌ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၁၀ ဦး အသတ်ခံရခြင်းနှင့် ဇွန်လ (၈) ရက်နေ့ တွင် မောင်းတော၌ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက ရခိုင်လူထုများအပေါ် ပြန်လည်၍ အကြမ်းဘက်မှုများ ပြုကြခြင်းဖစ်သည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၁၀ ဦး အသတ်ခံရခြင်းနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ယခုအချိန်အထိ ဖေါ်ထုတ်အရေးယူခြင်းမပြုပါ။ ထိုနည်းတူ မောင်းတောတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ ပြန်လည်အကြမ်းဘက်မှုကို တားဆီးနိုင်ပါလျှက် အာဏာပိုင်များက ကာကွယ်တားဆီးမှု မပြုခဲ့ပါ။ ယင်းနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာ စာမျက်နှာ ၈၂ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
“မောင်းတောဖြစ်စဉ်တွင် ထိုစဉ်က နစက အကြီးအကဲလုပ်သူက ပြတ်သားစွာ ကိုင်တွယ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့မည် ဆိုပါက ယခု ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာမည် မဟုတ်ကြောင်း ရခိုင်ရပ်မိ၊ ရပ်ဖများမှ ဝေဘန်သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။”
ပထမဖြစ်ရပ်တွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို အရေးမယူသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာများနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမြောက်အများ ယခုအချိန်အထိ အကြိတ်အခဲ ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒုတိယဖြစ်ရပ်တွင် ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါလျှက် မကာကွယ်ခဲ့သဖြင့် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည့်အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် အခြားဒေသများသို့ ပျံ့သွားခဲ့သောကြောင့် ရခိ်ုင်လူထုများက မကြေမနပ်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၄င်းအကြိတ်အခဲများ၊ မကြေနပ်မှုများသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးပျက်သုဉ်းခြင်းကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း၏ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ပဋိပက္ခများ ဆက်လက် ကြီးထွားသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာအရ ပေါ်လွင်သော ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်သာမက ပထမဆုံး စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကျောက်နီမော် လူသတ်မုဒိန်းမှုတွင် အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်ခဲ့သည့်အတွက် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ပျက်သုဉ်းရာတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသူမှာ (ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် ဗဟိုအစိုးရဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် ၄င်းတို့၏ တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေး ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ (ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို မတည်ဆောက်ခဲ့သဖြင့် အကြမ်းဘက်ပဋိပက္ခများသည် မြန်မာနိုင်ငံ အခြားနေရာ အတော်များများသို့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာက လူ့အခွင့်အရေးရှုဒေါင့်မှ စွပ်စွဲလာမှုကို ကော်မရှင်က ပယ်ချသည် ဟူသည့်အပေါ် သုံးသပ်ချက်
နိုင်ငံတကာက လူ့အခွင့်အရေးရှုဒေါင့်မှ စွပ်စွဲလာမှုကို ပယ်ချကြောင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဒေါ်ရင်ရင်နွယ်က ပြောခဲ့သည်။ ပယ်ချရသည့် အဓိကအကြောင်းမှာ နိုင်ငံတကာသည် ဘင်္ဂါလီ တဘက်တည်းကိုသာ မေးခဲ့ပြီး ရခိုင်လူမျိုးများဘက်ကို မမေးခဲ့သောကြောင့် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် အခြားသူတချို့ကလည်း အလားတူ တုန့်ပြန်ခဲ့ဘူးသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်မူ နိုင်ငံတကာသည် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဘက်ကိုလည်း မေးသင့်သလောက် မေးမြန်းခဲ့သည်။ အရင်းခံအားဖြင့်မူ ဘက်နှစ်ဘက် ရှုဒေါင့်မှ အဓိက ချဉ်းကပ်ရန် မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွင်း၌ မည်သို့သော အခြေအနေများ ဖြစ်ပွားသောအခါ နိုင်ငံတကာက လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုရှုဒေါင့်မှ ချဉ်းကပ် ကိုင်တွယ်သည်ကို ကော်မရှင်အနေဖြင့် လေ့လာသင့်သည်။ ရိုးရိုးပြစ်မှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတို့၏ ဆက်စပ်မှုနှင့် ကွာခြားမှုအပေါ်လည်း ရှင်းလင်းစွာ နားလည်ရန် လိုပါသည်။
သာဓကဆိုပါမည်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွင်း၌ ဘာသာရေးအရဖြစ်စေ၊ လူမျိုးရေးအရဖြစ်စေ၊ အခြားအကြောင်းတခုခုအရဖြစ်စေ လူတဦးက အခြားတဦးကို၊ လူအုပ်စုတခုက အခြားအုပ်စုတခုကို၊ သတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်သည် ဆိုကြပါစို့။
လူ့အခွင့်အရေးရှုဒေါင့်မှ ကြည့်လျှင် သတ်ဖြတ်ခံရသူ၏ အသက်ရှင်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့် ရုပ်သိမ်းခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သာမန်အားဖြင့် နိုင်ငံတကာက ၀င်ရောက်စွက်ဘက် ပြောဆိုမည်မဟုတ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာအတွင်း ကျရောက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၄င်းနိုင်ငံ၏ အစိုးရကသာလျှင် အဆိုပါနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ သို့မဟုတ် ကျူးလွန်သူများကို အရေးယူ အပြစ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံပြည်နယ် အနောက်ခြမ်းတွင် လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အတော်များများ သေဆုံးကာ လူဦးရေ နှစ်သိန်းခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကုလသမဂ္ဂသည်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အစည်းကြီးများသည်လည်းကောင်း ၀င်ရောက်စွက်ဘက် ပြောဆိုကြခြင်းမရှိပါ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာအတွင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရများက ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
သို့ရာတွင် အစိုးရကိုယ်တိုင်က လူထုအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုကို ကျူးလွန်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အင်အားစုတရပ်ရပ်က ကျူးလွန်မှုကို အစိုးရက အားပေးကူညီခြင်း၊ တနည်းနည်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ကျူးလွန်မှုကြီးများ ဖြစ်ပွားနေပါလျှက် ကျူးလွန်သူများကို အစိုးရက ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမှုမပြုခြင်းတို့ဖြစ်လျှင်မူ ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးများအနေဖြင့် ဖြစ်စေ ၀င်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ကြိုးပမ်းကြရသည်။ ဤသည်မှာ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေအခြေခံများပေါ်၌ နိုင်ငံတကာက ကျင့်သုံးသည့် အစဉ်အလာလည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၌ အလားတူ အခြေအနေများ ဖြစ်ပွားနေသည့် အထောက်အထားများအား နိုင်ငံတကာ တွေ့ရှိသဖြင့်သာ ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာက ၀င်ရောက်ပြောဆိုလာကြခြင်းဖြစ်သည်။ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများလည်း ရှိလာနိုင်သည်။
ဒေါက်တာဒေါ်ရင်ရင်နွယ်နှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အချို့ ပြောသလို နိုင်ငံတကာအနေဖြင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအား စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု နည်းကောင်းနည်းပါမည်။ ဤသည်မှာ အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ တချက်မှာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ စစ်တပ်နှင့် အခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် ရိုဟင်ဂျာများနှင့် ပေါင်းကာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုများ ကျူးလွန်နေကြောင်း၊ သတင်းမရခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်တချက်မှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ စစ်တပ်နှင့် အခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် မိမိတို့အပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုများ ကျူးလွန်နေကြသည်၊ ရွာများမီးရှို့၊ လူသတ်၊ မုဒိန်းကျင့် စသဖြင့် ကျူးလွန်နေပါသည်ဟု တိုင်တန်းခြင်းမပြုခဲ့သောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ယင်းသို့ ကျူးလွန်မှု သက်သေအထောက်အထားများ ရှိပါက ကော်မရှင်အနေဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဒေါက်တာဒေါ်ရင်ရင်နွယ် အနေဖြင့် ဖြစ်စေ နိုင်ငံတကာသို့ တိုင်တန်းမည်ဆိုပါက ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအား အဓိကထား၍ လာေ၇ာက် စစ်ဆေးမးမြန်းရန်မှာ ရာခိုင်နုန်းပြည့် သေချာသည်။
အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားရခြင်း၏ လတ်တလောအကြောင်းရင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းရင်းများ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ စတင်ခဲ့ပြီး တနိုင်ငံလုံးသို့ တဖြေးဖြေး ပျံ့နှံ့နေပြီဖြစ်သော အကြမ်းဘက်ပဋိပက္ခကြီး၏ လတ်တလောအကြောင်းရင်းမှာ လူမျိုးရေးကွဲပြားမှုနှင့် ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ခြားနားမှုတို့အပေါ် အခြေခံပြီး တဘက်နှင့် တဘက် အပြန်အလှန်ပုတ်ခတ် စွပ်စွဲကြရာမှ စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် ပြသနာမဟုတ်ပါ။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံအရ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူမှန်သမျှကို ကျောသားရင်သားမခွဲခြားဘဲ တန်းတူထား၍ ပြတ်ပြတ်သားသား ထိထိေ၇ာက်ရောက် အရေးမယူခဲ့ခြင်းမှာ ပထမ လတ်တလောအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ စစ်တပ်နှင့် အခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ ကိုယ်တိုင်က ဘက်တဘက်တွင် ရပ်၍ ပြစ်မှုကြီးများအား ပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်ဟု နိုင်ငံတကာက ထောက်ပြစွပ်စွဲလာသည်က ပို၍ အရေးကြီးသော ဒုတိယ လတ်တလော အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
ဤလတ်တလောအကြောင်းရင်းနှစ်ရပ် ဖြစ်တည်လာခဲ့ပြီးနောက် နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းရင်းတို့လည်း ပေါ်ပေါက်လာပြန်သည်။ ယင်းတို့မှာ ဘာသာရေးအုပ်စုကြီးနှစ်ခုမှ အချို့သော အစွန်းရောက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ဘာသာဝင်များနှင့် အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒီများက နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံး၍ လှုံ့ဆော်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အကြမ်းဘက်ပဋိပက္ခကြီးများသည် တိုင်းပြည်၏ နေရာဒေသ အတော်များများသို့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
လတ်တလော အကြောင်းရင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းရင်းတို့ကို နိုင်းယှဉ်လေ့လာရန် လိုပါမည်။ လတ်တလော အကြောင်းရင်းသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်။ နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းရင်းသည် သာသာရေးအရ မတူကွဲပြားသည့် ဘာသာများ အတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ ရပ်တည်နိုင်ရေး၊ အပြန်အလှန်လေးစားမှု တည်ဆောက်ရေးတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးအရ အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒကို စွန့်လွှတ်ပြီး လူမျိုးပေါင်းစုံ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး အခြေခံတွင် မိမိအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို သမာသမတ်ကျစွာ ဖေါ်ဆောင်နိုင်ရေး အတွေးအခေါ် စိုက်ထူမှုနှင့်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်သည်။
နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းရင်းများသည် အရေးမကြီးမဟုတ်ကြီးပါသည်။ သို့ရာတွင် ယနေ့တပြည်လုံးသို့ ပျံ့နှံ့နေပြီဖြစ်သော အကြမ်းဘက်ပဋိပက္ခကြီးများနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးနီးပါးသည် နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းရင်းများအပေါ်တွင်သာ ကုစားအဖြေရှာကြရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိရောက်မှု အားနည်းနိုင်သည်။
လတ်တလောအကြောင်းရင်းများနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ အမှန်တရားပေါ်အောင် အဓိကထားဖေါ်ထုတ်ပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလျှင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အခြေခံအားဖြင့် တည်ဆောက်နိုင်ပါမည်။ ထို့နောက် နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းရင်းများကို တဖြေးဖြေး အချိန်ယူကုစားသွားရန် ဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်ပဋိပက္ခများ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်သည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့် လတ်တလော အကြောင်းရင်းကို မီးမောင်းထိုးကာ အမှန်တရားပေါ်အောင် ဖေါ်ထုတ်ခဲ့ခြင်းမရှိ။ လတ်တလောအကြောင်းရင်း နှစ်ရပ်အနက် ပထမတရပ်ကို ကော်မရှင်ကိုယ်တိုင် ၀န်ခံရသည်။ ထို့အပြင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကိုယ်တိုင်က ဘက်တဘက် နှင့်ပူးပေါင်းကာ ပြစ်မှုကြီးများအား ပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်ဟု နိုင်ငံတကာက ထောက်ပြစွပ်စွဲသည့် ဒုတိယအကြောင်းရင်းကိုလည်း ကော်မရှင်က မျက်စိမှိတ် ပယ်ချခြင်းမှလွဲ၍ အချက်အလက်နှင့် မငြင်းနိုင်။ သို့ရာတွင် အစီရင်ခံစာ၌ လတ်တလောအကြောင်းရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မဖေါ်ထုတ်ဘဲ နောက်ခံအကြောင်းရင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းရင်းများကိုသာ ဋီကာချဲ့ပြီး ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် ကာလုံနှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ တာဝန်ရှိမှုကို ဖုံးကွယ်သွားစေခဲ့သည်။ ယင်းအတွက် ကော်မရှင်အား ဦးသိန်းစိန်က များစွာ သဘောကျသွားပုံရသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ (၆) ရက်နေ့တွင် တိုင်းပြည်သို့ မိန့်ခွန်းပြော၍ပင် ချီးမွမ်းခဲ့သည်။
(ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးပျက်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်သလား။
ရခိုင်မှ တရုတ်ပြည်သို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလျံပေါင်းများစွာ ချီကာ တန်ဘိုးရှိသည့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းတည်ဆောက်နေပါသည်။ ယင်းအပေါ် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထုများက အားကောင်းကောင်းနှင့် ကန့်ကွက်နိုင်ခြင်း မရှိစေရန် အာရုံလွှဲလိုက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု လူထုအတော်များများက ယူဆလာကြသည်။ ထို့ပြင် တည်ဆောက်ပြီးသည့်အချိန်တွင် လက်ရှိနှင့် နောင်တက်လာဦးမည့် စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်က နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ ဆက်လက် အမြတ်ထုတ်အကျိုးခံစားနေဦးမည့်အပေါ် မကန့်ကွက်နိုင်တော့စေရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထုများနှင့် ၄င်းတို့၏ နိုင်ငံရေးပါတီများ အားနည်းချိနဲ့သွားစေရန်၊ လုံခြုံရေးအရ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ စစ်တပ်နှင့် အခြား လုံခြုံရေးအဖွဲ့များကိုသာ ထာဝရအားကိုးသွားစေရန် မဟာဗြူဟာချမှတ် လုပ်ဆောင်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
အထက်ပါ သုံးသပ်ချက် မမှန်ဟူ၍ (ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသ်ိန်းစိန် အစိုးရက သက်သေပြလိုပါက ပိုက်လိုင်းနှင့် ဆက်စပ်သော သတင်းအချက်အလက်မှန်သမျှကို ရှင်းလင်းစွာ တပြည်လုံးသို့ ထုတ်ပြန်ကြေငြာရန် လိုသည်။ ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ အကြမ်းဘက် ပဋိပက္ခများကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်လူထု၏ စီးပွားရေးမှာ ချွတ်ခြုံကျပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့် ပြန်လည်ကုစားနိုင်ရန် ပိုက်လိုင်းမှရသော ၀င်ငွေအားလုံးကို ရခိုင်ပြည်နယ် အကျိုးစီးပွားအတွက်သာ သုံးစွဲသွားနိုင်စေရန် ဥပဒေတရပ် ပြဌာန်းကာ လွှဲအပ်ဖေါ်ဆောင်သွားရန် လိုအပ်သည်။
မည်သို့ ပင် နောက်ဆက်တွဲကုစားမှုများပြုစေဦး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဥပဒေစိုးမိုးရေးပျက်စီးစေခဲ့သည့်အတွက် ယင်းမှ စတင်ကာ တပြည်လုံးသို့ပျံ့ နှံ့ စေခဲ့ရာ၌ တာဝန်ရှိမှုမှနေ၍ (ကာ/လုံ) နှင့် ဦးသိန်းစ်ိန်အစိုးရသည် ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်။ အဖွဲ့အစည်းသဘောအရ တာဝန်ရှိမှုနှင့် အမိန့်ပေးခြင်းအရ တာဝန်ရှိမှု ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် ဂွါတီမာလာနိုင်ငံ၌ အာဏာသိမ်းပြီး တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အက်ဖရိန်ရိုင်ယိုမွန့်သည် အစ်ဇီးလ်မာယာ အမည်ရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဝင် ဦးရေ ၁၇၇၁ ဦးအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု စွဲချက်တင်ကာ တရားရုံး၌ သက်သေပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို စစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ၄င်းအပေါ် ထောင် နှစ်ည ၈၀ ချခဲ့သည်။ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအတွက် နှစ် ၅၀၊ လူသားဖြစ်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ပြစ်မှုအတွက် နှစ် ၃၀ နှစ်ခုပေါင်း ထောင်နှစ် ၈၀ ဖြစ်သည်။ “သမ္မတ တာဝန်ယူထားစဉ်အတွင်း သတ်ဖြတ်မှုကြီးများ ကျူးလွန်နေတာကို သိရက်နဲ့ ရပ်ဆိုင်းသွားအောင် ကာကွယ်တားဆီးခြင်း မလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာရောက်တယ်” ဟု တရားသူကြီး ဂျက်စ်မင်ဘာရီရော့က စီရင်ချက်တွင် ထည့်သွင်းဖတ်ကြားသွားခဲ့သည်။
အာဂျင်တီးနား၊ ချီလီ၊ ဂွါတီမာလာ အစရှိသော နိုင်ငံများတွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဟူသည်ကို အကြောင်းပြ၍ ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုကြီးများအား မေ့မထားဘဲ ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ပြီး အရေးယူနေကြခြင်းမှာ စစ်မှန်သည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံများ တည်ဆောက်ပြီး တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်၊ ငြိမ်းချမ်းကာ၊ လူထုတရားမျှတမှု ရစေရန် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက် တပ်မတော်နေ့တွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ၄င်း၏ တပ်မတော်သည် မည်သည့်အခါကမျှ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုနှင့် စစ်ရာဇ၀တ်မှုများ မကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းထည့်သွင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ စစ်ရာဇ၀တ်မှုနှင့် လူသားဖြစ်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ပြစ်မှုများအား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် ဥပဒေအဖြစ်ပြဌာန်းထားမှု မရှိသေးပါ။ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ၏ အစိပ်အပိုင်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ယင်းတို့ကို ချိုးဖေါက်ကျူးလွန်ခြင်းမှာ ပြစ်မှုမြောက်သည်ဟူ၍ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင် ကိုယ်တိုင်က ၀န်ခံလိုက်သည့် သဘောဖြစ်သည်။ ယင်းမိန့်ခွန်းကိုးကားကာ အာဏာပိုင်များက ပြဌာန်းထားသည့် ပြည်တွင်းဥပဒေများအတိုင်းသာ စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခြင်း Rule by Law မှနေ၍ နိုင်ငံတကာ စံထားချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး Rule of Law သို့ ပြောင်းလဲဖေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် စတင်လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်သင့်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ နိုင်ငံတကာပြစ်မှုကြီးများအား တပ်မတော်က မကျူးလွန်ပါဟူ၍ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်၏ ငြင်းဆိုချက်ကိုမူ လက်ခံနိုင်ဘွယ်မရှိပါ။ ၄င်းပြစ်မှုကြီးများမှာ မည်သည့်အရာများဖြစ်သည်ကို ဥပဒေသမားများပင် နားလည်အောင် မနည်းကြိုးပမ်းကြရသည်။ ယင်းတို့နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ တပ်မတော်အတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပညာပေးရေးလုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်း တကြိမ်တခါမျှ မကြားသိခဲ့ရပါ။ သို့ဖြစ်၍ တပ်ဗိုလ်၊ တပ်သား တကယ့်အများစုကြီးမှာ မည်သည်တို့ကို ကျူးလွန်လျှင် မည်သည့်ပြစ်မှုမြောက်သည်ဟူ၍ နားလည်နိုင်ကြခြင်းမရှိသေးသည်မှာ ရာနုန်းပြည့်နီးပါး သေချာသည်။ လတ်တလောဖြစ်ရပ်များကို သုံးသပ်လျှင်ပင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်ရာဇ၀တ်မှုနှင့် လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသတွင် ဆန္ဒပြသံဃာများအပေါ် လူသားဖြစ်မှုကို ဆန့်ကျင့်သည့်ပြစ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပြီဟု နိုင်ငံတကာဥပဒေအခြေခံမှ သုံးသပ်နိုင်သည်။ အသေးစိပ်ကို ဤစာတမ်း၏ ဒုတိယပိုင်းတွင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါမည်။
အထက်ပါ ပြစ်မှုကြီးများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ တာဝန်ရှိမှုကို ရှာဖွေရာတွင် အဖွဲ့အစည်းသဘောအရ တာဝန်ရှိမှုနှင့် အမိန့်ပေးခြင်းအရ တာဝန်ရှိမှု နှစ်ခုတို့၏ ဆက်စပ်မှုနှင့်ကွာခြားမှုတို့ကို လေ့လာဘို့လိုပါမည်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် လည်းကောင်း၊ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်သည်လည်းကောင်း တိုင်းပြည်တွင် အမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် (ကာ/လုံ) ၏ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသဖြင့် ယနေ့တိုင်းပြည်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော အကြမ်းဘက်ပဋိပက္ခကြီးများနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ၄င်းတို့တွင် ယေဘုယျအားဖြင့် တာဝန်ရှိကြသည်။
ရခိုင်ပဋိပက္ခတွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအား (ကက/ကြည်း) က တိုက်ရိုက်အမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်း ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာအရ ပေါ်လွင်သဖြင့် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တွင် တာဝန်ရှိသည်။ (ကာ/လုံ) အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကို တာဝန်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါက (ကာ/လုံ) အဖွဲ့ဝင်အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိသည်။ သို့မဟုတ်ဘဲ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်အား ရခိုင်ပဋိပက္ခများကိစ္စ ဆောင်ရွက်၇န် တာဝန်ပေးခဲ့ပါက ဦးသိန်းစိန်သည် အကြီးအကဲ အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်သည် လက်အောက်ငယ်သား အနေဖြင့်လည်းကောင်း တာဝန်ရှိသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ကေအိုင်အိုကို ထိုးစစ်ကြီးများ ဆင်နွှဲခဲ့စဉ် စစ်ရေးသဘောအရ ကာချုပ်မင်းအောင်လှို်င်မှာ အဓိကတာဝန်ရှိသည်။ စစ်ရာဇ၀တ်မှုများ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းနှင့်စပ်လျှဉ်း၍မူ အကြီးအကဲ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တွင် တာဝန်ရှိသလား၊ စစ်မြေပြင်တခုလုံးကို အနီးကပ်ကွပ်ကဲရသည့် လက်အောက်ငယ်သား မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှုးတွင် တာဝန်ရှိသလား ဟူသည်ကို သုံးသပ်ရပါမည်။ ဤတွင် နိုင်ငံတကာဓလေ့ ထုံးတမ်းဥပဒေ အရသာမက (ရ၀မ်ဒါ နိုင်ငံတကာပြစ်မှုဆိုင်ရာခုံရုံး က ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဆီအာရာလီယွန်းအထူး တရားရုံး ကပါ လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သည့် လက်တွေ့အရ) သမားရိုးကျ နိုင်ငံတကာဥပဒေ အဖြစ်ပင် လိုက်နာကျင့် သုံးလာကြပြီဖြစ်သော သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်အရ အကြီးအကဲနှင့် လက်အောက်ငယ်သား ဆက်ဆန်ရေး အရ တာဝန်ရှိမှုကို လေ့လာရန် လိုပါသည်။ ဂွါတီမာလာနိုင်ငံက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အက်ဖရိန်ရိုင်ယိုမွန်၏ မှုခင်းနှင့် နိုင်းယှဉ်လေ့လာလျှင် အကျိုးရှိပါမည်။
(မူရင်းသတ်ပုံအတိုင်း Aung Htoo ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 5:55 PM
ဒီမိုကရေစီ ဆီသွားမယ်. မီးရထား
ကြီး ကမကြာခင်ထွက်တော.မှာပါ ၊
... စောစောကဘဲ .. ဘဘ ဦးသိန်းစိန် နဲ. အန်တီစုတို. ဦးဆောင်ပြီး ..... ကျောက်မီးသွေးရှာဖို. .......
ဂေါ်ပြား တွေကိုယ်စီနဲ. တောင်ပေါ် တက်သွားတာ ......
တရားရုံးတစ်ခုမှာ ရှေ့နေက ကိုယ့်အမှုသည် အနိုင်ရဖို့အရေး အကိုးအကား အချက်အလက်တွေနဲ့ လိုရာရောက်အောင် ရှည်လျားစွာ လျှောက်လဲချက်ပေးနေသလိုပဲ..
အောင်ထူး ,.ရခိုင်ပဋိပက္ခမှာ အစိုးရက ဘက်တစ်ဘက်နဲ့ပေါင်းပြီး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်လို့ ကုလ နဲ့hrw ကပြောတယ် hr ရှုထောင့်ကပြောတယ်ပေါ့။ ဟုတ်ပြီ ရခိုင်ဘက်ကလည်း ဘက်တစ်ဘက်နဲ့ပေါင်းပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံမှု စိုးရိမ်မှုကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အပြင် ကုလ hrw တို့ကလည်းဘက်တစ်ဘက်ပါပြီး သူတို့ native တိုင်းရင်းသားတွေ ကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ခံစားရလို့ရခိုင် တွေ UNHCR ရှေ့မှာဆန္ဒပြ ကြတာကိုမင်းသိလား။ Aljazeer ကပြသွားတဲ့ hidden genocide သတင်းကအမှန်ပဲလို့မင်းယုံလား အချက်အလက်သေချာတယ်လို့ယုံကြည်လား။ဒီလို ပြည်ပmedia တွေနဲ့ဝါဒဖြန့် ပြီး တစ်ဖက်သတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှတ်ချက်ချတဲ့ UN နဲ့ HRW တို့ကကော လူ့အခွင့်အရေးမချိုးဖောက်ဘူးလား HRW ကိုယ်တိုင်က လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ရင် ဘယ်သူစောင့်ကြည့်ရမှာလဲ Bullshit ကွာ။
လူအခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကို အပြည့်အ၀ ယုံကြည်မှု မပေးနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာရှင်အောက် ပြားပြားမှောက်နေအောင် လူ့အခွင့်အရေး တစ်တိုင်းပြည်လုံး အကြီးအကျယ် ခြိုးဖောက်ခံနေရချိန်မှာ ဘယ်တစ်ကောင့်သားကမှ အခုလို မလာခဲ့ကြပါဘူး။ လာခဲ့ကြသူတွေကလည်း သူ့အိပ်ထဲကို ထည့်စရာရှိထည့်ပြီး လေလုံးတွေ၊ ကြော်ငြာချက်တွေနဲ့ပဲ ပြီးခဲ့ရတာပါ။ အမှန်တကယ် လူ့အခွင့်အရေး ခြိုးဖောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မခြိုးဖောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တောင်းဆိုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအရင်း ဇစ်မြစ်အမှန်ကို သိချင်ရင် နှစ်ဖက်စလုံးကို အကျေအလည် မေးမြန်းဆွေးနွေးရမှာပါပဲ။ တိုင်တန်းမှ ဆိုရင်လည်း အတိုင်ခံရတဲ့ဖက်ကို တိတိပပ မေးမြန်းရမှာပါပဲ။ တစ်ဖက်ဖက်ကို ဇောင်းပေးပြီး မေးမြန်းနေသ၍ကတော့ ဘယ်လိုမှ အချက်အလက်အမှန်ကို ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အချက်အလက်အမှန်ကို မရမှတော့ ဘယ်လိုလုပ် သုံးသပ်ချက်အမှန်တွေ ထွက်လာနိုင်မလဲ။ ဒေါ်ရင်ရင်နွယ်မှာလည်း နိုင်ငံတကာ အတွေ့အကြုံ သိပ်မနည်းလှဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သူပြောတာ ယုတ္တိဆန်ပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင်မှာ ဘာရာဇ၀တ်မှုကိုမှ ကျူးလွန်ခြင်းမရှိ၊ အေးချမ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ် (အဲဒီအချိန်မှာ ဆန္ဒတောင်မပြနေပါဘူး အိပ်နေ ကျိန်းနေကြတာပါ)နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ မီးလောင်တိုက်သွင်းခံရတော့ အဲ့ဒီလူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေ ဘယ်ရောက်နေလဲ။ မီးခိုးဗုံးပဲခေါ်ခေါ် မီးလောင်ဘုံးပဲပြောပြော မြင်မကောင်းအောင် တကိုယ်လုံး မီးလောင်ဒါဏ်ရာတွေ ရကြရတာကတော့ အမှန်ပဲ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာလေးတစ်စောင်၊ ဝေဖန်ချက်လေးတစ်ခုများ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသလား။ ဒီထက်စစ်မှန်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှု ရှိဦးမလား။ ပြည်တွင်းရေးမို့ ဆိုပြီး ခွဲခြားပြောဆိုနေတာတွေက ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ ၀င်ပါချင်ပါတာပါပဲ။ မပါချင်ရင်လည်း မပါဘူး။ ခြုံပြီးပြောရရင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း ဆိုတာတွေကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ လိုအပ်သလို အလုံးစုံ သမာသမတ် ရှိပါတယ်ဆိုပြီး မျက်စိမှိတ်ယုံကြည်ပေးလို့လည်း မရပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက လူမှာ ချစ်စွဲ၊ မုန်းစွဲ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ချစ်တဲ့သူရဲ့ မျက်နှာကို အတွေးပုံရိပ်မှာ ဘာလုပ်လုပ် စွဲလမ်းစိတ်နဲ့ မြင်ယောင်နေတတ်သလို အရမ်းမုန်းနေပြီးဆိုရင်လည်း မုန်းသူရဲ့မျက်နှာကို အချိန်ပြည့် တွေးတော မြင်ယောင်နေတတ်တာပါပဲ။ နှစ်ခုလုံးက အစွဲအလမ်းတွေပါပဲ။ ဘယ်ဟာမှ မကောင်းပါဘူး။ အထူးသဖြင့် စာရေးတဲ့အခါ အစွဲကင်းဖို့ ပိုလိုအပ်ပါတယ်။
အခုစာထဲမှာက အချို့အကြောင်းအရာတွေမှာ မုန်းစွဲ စွဲနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကာချုပ်နဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ ရှိနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍထက် ပိုပြီးတွေးခေါ် ထင်မြင်လွန်းနေတာတွေဟာလည်း မုန်းစွဲစွဲနေတာပါ။ ကိုယ်က ထင်မြင်ချက် ပေးနေသလိုလိုနဲ့ တကယ်တော့ ကိုယ်ကိုတိုင်က နေရာပေး ဘုံမြှောက်သလို ဖြစ်နေတာပါ။
အချက်အလက် အယူအဆ ထင်မြင်ချက်တွေ စုံလင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့နေရာတွေမှာ တရားရုံးတစ်ခုမှာ ရှေ့နေက ကိုယ့်အမှုသည် အနိုင်ရဖို့အရေး အကိုးအကားအချက်အလက်တွေနဲ့ လိုရာရောက်အောင် လျှောက်လဲချက်ပေးသလို ရှည်လျားဝေ့၀ါး နေပါတယ်။
ဆောင်းပါးထဲမှာ ကျနော်တို့လို သာမှန်ပြည်သူတွေအတွက် သဘောတူတာတွေရော မတူတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
.ရခိုင်ပဋိပက္ခ ၊ မိတ္ထီလာ ပဋိပက္ခ စတာတွေ မှာ မြင်ရ ၊တွေ.ရတာတွေ မြင်ရသူတိုင်း ကတော. မနှစ်မြို.စရာပါ ။
.... ခက်တာက ကမ္ဘာ နဲ. အ၀ှမ်း ဖြစ်နေတာကလည်း
အစ္စလမ်နဲ. တခြား ဘာသာ တွေဖြစ်နေတာဘဲတွေ.ရတယ် ။
ကျနော်က ဘာသာရေးဆိုတာ ကိုဝေဖန်တာလုပ်ဖို. ဆန္ဒ
လုံးဝမရှိသလို ၊ အရည်အချင်းလည်း မရှိပါဘူး ၊
.... ကျနော်တို. မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗလီတွေ ရာချီ နဲ. များမှများ ပါ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ... သဘော ကောင်း ပုံ ၊
Flexible ဖြစ်ပုံ များ ၊
.. ဒါပေမယ်. အစ္စလမ်နိုင်ငံ တွေ (ဆော်ဒီ ၊ အီရန်၊ ဘရူနိုင်း စသည် ) မှာ စေတီ ၊ပုထိုး ၊ သာသန အဆောက်အအုံ တစ်ခု တစ်လေ တည်ခွင်. မရနိုင်ပါ ၊
.. မြင်ကွင်းကျယ် ဘာသာရေးအခင်းအကျင်းက တစ်
.. နောက်ပြီး (ကိုယ်တွေ.အရ) အိမ်မှာ ဘောလုံးပွဲ ကိုအစ္စလမ်ဘာသာဝင် တွေလာကြည်.ရင်
.. မြန်မာအသင်းကို အားမပေးဘဲ မလေးရှားအသင်း
ကို (အစ္စလမ်နိုင်ငံမို.) အားပေးတာတွေ.ရတယ် ၊
ယနေ. ကမ္ဘာနဲ. အ၀ှမ်းဖြစ်နေတဲ. ဘာသာရေး
အဓိကရုန်းတွေဟာ .. အောက်ခြေ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်တွေ ရဲ. အသက် အိုးအိမ်နဲ.ဘ၀တွေ
စတေး ပြီး .... ဘာသာရေးပန်းတိုင်ကို ချီတက်နေတာ
လို.သုတေသီ တွေက စွပ်စွဲလာကြတယ် ၊
.. နိုင်ငံတော်အနေနဲ. သတိ နဲ. Recover ဖြစ်အောင် ဆောက်ရွက်သွားသင်.တယ်။